प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा शास्वतधाममा विशेष पूजा « Lokpath
arrest#death#police arrest#rabi lamichhane#sports#tips#पक्राउ#बलात्कार#मृत्यु#हत्या
प्रकाशित मिति : २१ बैशाख २०७६, शनिबार ०६:१८
नवलपरासी । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नवलपुरको सिजी इन्डस्ट्रियल पार्कस्थित शास्वतधाममा रहेको एकाम्बरेश्वर शिव मन्दिरमा बिषेश पूजा, अर्चना गरेका छन् ।
उक्त अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले चौधरी फाउण्डेसनद्वारा स्थापित कृतिम हातखुट्टा जडान केन्द्रको शुभारम्म पनि गरेका छन् ।
शनिवार दिउँसो हेलिकप्टरवाट आएका प्रधानमन्त्री ओलीले शाश्वतधाममा रहेको धार्मिक संग्राहलयको अबलोकन पनि गरे । शाश्वत धाममा चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष एवं सांसद बिनोद चौधरीले प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गरेका थिए ।
शाश्वत धामको आकर्षक एवं भव्य कलात्मक मन्दिरबाट आफु प्रभावित भएको प्रधानमन्त्रीले बताए ।
प्रधानमन्त्रीले औद्योगिकरण, समाजसेवा र धार्मिक कार्यमा समेत प्रशंसनीय काम गरेर उद्यमी बिनोद चौधरीले सफलताको उदाहरण प्रस्तुत गरेको बताए । शास्वतधाम नेपालकै गहना भएको र यसले धार्मिक पर्यटन र सामाजिक एकता तथा धार्मिक सहिष्णुता कायम राख्न उच्च योगदान भन्दै उनले प्रशंसा गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कृतिम हातखुट्टाको अभावमा रहेका नागरिकलाई स्थाई केन्द्रबाट ठूलो राहत पुग्ने आशा पनि व्यक्त गरे ।
मानवीय सेवामा चौधरी ग्रुपको योगदान प्रशंसायोग्य भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक काममा अझै धेरे काम गर्न पनि ग्रुपलाई प्रोत्साहित गरे । चौधरी फाउण्डेसनले यसअघि काठमाडौं र नवलपुरको सहज अस्पतालमा शिविरको आयोजना गरि ५०८ जनालाई कृतिम हातखुट्टा जडान गरिदिएको थियो ।
मुलुकभर करिब एक लाख व्यक्तिका लागि यस्तो सेवा आवस्यक रहेकाले स्थाई केन्द्रमार्फत् सेवा दिन लागिएको चौधरी फाउण्डेसनका अध्यक्ष चौधरीले बताए । फाउण्डेशनले बिभिन्न कारणले हातखुट्टा गुमाएका ब्यक्तीलाई निशुल्क कृत्रिम हातखुट्टा जडान गरेर सेवा दिदै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँगै नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल लगायतका नेताहरु प्नि शाश्वत धाम आएका थिए ।
तपाईमा पनि यस्तै समस्या देखा परेको छ ? सावधान ! चिकित्सकलाई भेटिहाल्नुस्
काठमाडौं । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार “स्वास्थ्य भनेको रोग तथा दुर्बलताबाट मुक्त हुनु
राप्ती स्वाथ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका डाक्टरहरुद्वारा सामूहिक राजीनामा
काठमाडौं । दाङस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका डाक्टर तथा कर्मचारीहरुले सामूहिक राजीनामा दिएका
हेर्नुहोस् २०७६ भदौ ६ गते शुक्रबारको राशिफल
आज मिति २०७६ साल भदौ ६ गते शुक्रबार। ज्योतिष शास्त्रका अनुसार तपाईको दिन
‘प्रेम’लाई सफल बनाउने हो ? अपनाउनुहोस यस्ता उपाय
कुनैपनि व्यक्तिलाई आफू र आफ्नो ‘पार्टनर’को सम्बन्ध राम्रो र सुमधुर होस् भन्ने चाहना
नाइजेरियामा सवारी दुर्घटनामा १७ जनाको मृत्यु
काश्मिर सङ्कट सुल्झाउन म्याँक्रोको आग्रह
सिरहामा करेन्ट लागेर एक युवकको मृत्यु
तालिबानको आक्रमणमा तीन प्रहरी मारिए
पर्यटनसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत